Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Ekworo -> Omume Ọjọọ
Omume Ọjọọ: [Ekworo]
1 KỌRINT 3:3
Nꞌihi na unu na-adị ndụ dị ka ndị bi nꞌụwa, ndị ọchịchọ nke anụ ahụ na-enugharị. Ebe ọ bụ na ekworo na esemokwu na-adị nꞌetiti unu, nke a o zipụtaghị na unu na-eme dị ka ndị ụwa, dị ka ndị mmadụ efu nọ nꞌụwa.
Ekwela ka ihe ọjọọ na-achị gị, kama site nꞌezi ọrụ ị na-arụ merie ihe ọjọọ nile.
 Ọtụtụ ihe dị nke ọ na-agụ unu agụụ inweta ma unu adịghị enweta ya. Nꞌihi ya unu na-egbu mmadụ nara ha ihe ahụ. Ọzọ, ọ bụrụ na unu ahụ ihe onye ọzọ nwere nke dị unu mma, unu na-enwe anya ukwu nꞌebe onye ahụ nọ. Ma nꞌihi na unu apụghị inweta ihe ahụ, unu na-alụ ọgụ na-ese okwu. Ma unu adịghị enweta ihe unu chọrọ nꞌihi na unu adịghị arịọ Chineke ihe ndị a. Ọ bụladị mgbe unu rịọrọ Chineke, ọ dịghị enye unu ihe unu rịọrọ ya nꞌihi na ihe unu chọrọ iji ihe ndị ahụ mee abụghị ezi ihe. Ọ bụ iji ha mee nanị ihe ga-atọ obi unu ụtọ.
 Ma mgbe Mmụọ Nsọ na-achị achị na ndụ anyị, ụdị ndụ a ga-apụta ìhè nꞌime anyị: ndụ ịhụnanya, na ọṅụ, na udo, na ogologo ntachi obi, na obi ọma, na ịdị mma, na ikwesị ntụkwasị obi, na ịdị nwayọọ, na nke emebigaghị ihe oke. Ọ dịkwaghị iwu na-emegide ihe ndị a.
1 PITA 2:9
Ma unu abụghị ndị ahụ ga-ada ada. Kama unu bụ agbụrụ Chineke ji aka ya họpụta. Unu bụ ndị nchụaja onye eze ahụ. Unu bụ ndị dị nsọ, ndị nke Chineke nꞌonwe ya. Unu bụ ndị a họpụtara ka ha kwusaa ọrụ ebube Chineke, onye ahụ si nꞌọchịchịrị kpọbata unu nꞌime ìhè ya.
1 KỌRINT 1:27-29
 Ma lee na ọ bụ ihe ahụ ụwa gụrụ dị ka ihe nzuzu, ihe na-abaghị uru, ka ọ masịrị Chineke iji mee ka ihere mee ndị amamihe ahụ. Ọ bụkwa ihe ha gụrụ dị ka ihe na-adịghị ike ka Chineke ji mee ka ihere mee ndị dị ike. Nꞌihi na Chineke họọrọ ihe dịkarịrị ala nke ụwa, na ihe a jụrụ ajụ, jiri ha mee ka ihe ụwa chere na ọ baghị uru, bụrụ ihe bara uru. Chineke mere nke a nꞌihi na ọ chọrọ ka anụ ahụ nile, bụ mmadụ, hapụ ịnya isi nꞌihi ihe ọ bụla, nꞌebe Chineke nọ.
Echela echiche nanị banyere ọdịmma nke gị, ebila ndụ nꞌụzọ ịdọtara onwe gị otuto ndị ọzọ. Kama bụrụ onye wedara onwe ya ala, onye echiche ya bụ ile ndị ọzọ anya dị ka ndị ka ya mma.
 Ma ọ bụrụ na obi unu ejupụta nꞌihe ilu na ekworo, o kwesịghị ka unu kwusie okwu ike banyere amamihe unu na ịdị mma unu. Nꞌihi na nke a abụghị eziokwu. Ụdị amamihe dị otu ahụ esiteghị nꞌebe Chineke nọ bịa. Ọ bụ amamihe nke ụwa, amamihe nke ekwensu, ọ bụghị amamihe nke Mmụọ Nsọ. Nꞌihi na ebe ọ bụla obi ilu na ekworo dị, ebe ahụ ka unu ga-achọta igba aghara na omume ọjọọ.
 Ya mere, nyenụ Chineke onwe unu. Guzonụ megide ekwensu, ọ ga-esi nꞌebe unu nọ gbapụ. Bịakwụtenụ Chineke nso, ya onwe ya ga-abịakwutekwa unu nso. Kwọọnụ aka unu, ndị mmehie, ma meekwanụ ka obi unu dị ọcha. Unu abụla ndị obi abụọ.
 Nꞌihi na ọ bụrụ na a chikọtaa iwu nile nꞌotu, ihe iwu nile na-ekwu bụ nke a, “Na-ahụnụ ndị ọzọ nꞌanya dị ka unu si hụ onwe unu nꞌanya.” Ọ bụrụ na unu na-akọcha ibe unu, na-eji ọnụ unu na-ekwutọ ha, kama ịhụ ha nꞌanya, kpacharanụ anya. Jienụ onwe unu aka ka unu hapụ ịla onwe unu nꞌiyi.
Anyị na-arịọkwa Chineke ka ọ gbaa unu ume, ka o mejụpụta unu nꞌike ya dị ebube ka unu nwee ike ịga nꞌihu nꞌọrụ unu nꞌọnọdụ ọ bụla, bụrụkwa ndị jupụtara nꞌọṅụ nke Onyenwe anyị na-enye,
Kama nweenụ ndidi ka unu meekwa uche Chineke. Nꞌụzọ dị otu a unu ga-anata ihe Chineke kwere unu nkwa.